သတင်း - ဟာနန်ဆိုင်
အားလုံးအကြောင်းအရာများ 2.55 Chanel ဂန္ နှစ်ဆခတ် နှစ်ဆ သမိုင်း ပန်းရောင် အိတ် နီသော လျှို့ဝှက်ချက် ပခုံးအိတ် ပခုံး နွေဦးပေါက် စဗျစ်ရည်
စပျစ်သီး Chanel ၏စျေးနှုန်းမြင့်တက်ရသည့်အကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိသည်
hannari ဆိုင်အားဖြင့် အောက်တိုဘာလ 28, 2020
မင်္ဂလာပါ Gorgeous ။ Vintage CHANEL ၏စျေးကွက်ပေါက်စျေးတက်သည်။ ဒီမှာဘာဖြစ်နေတာလဲ ငါအခုရှင်းပြချင်တယ်။ Coronavirus ကြောင့်လူတွေ ...
Vintage နှင့် Current Chanel Bags အကြားခြားနားချက်နှစ်ခု
hannari ဆိုင်အားဖြင့် အောက်တိုဘာလ 21, 2020
မင်္ဂလာပါ Gorgeous.Van CHANEL နဲ့ Current ver ကြားကအတူတူပါပဲ။ ငါအခုရှင်းပြချင်တယ်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ခန့်က Matrasses ကို v ...
လျှို့ဝှက်အိတ်ဆောင် CHANEL နှစ်ချက်ခေါက်သင်သိပါသလား။
hannari ဆိုင်အားဖြင့် အောက်တိုဘာလ 08, 2019
"CHANEL Double Flap ရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ဇစ်ကိုကျွန်တော်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီသေးငယ်တဲ့အိတ်ကပ်ကိုဘာတွေထည့်ရမလဲ။ ဒါကဘာလဲ။ "
Posted in, 2.55, Chanel, ဂန္, နှစ်ဆခတ်, နှစ်ဆ, သမိုင်း, အိတ်, လျှို့ဝှက်ချက်, ပခုံးအိတ်, ပခုံး, စဗျစ်ရည်
hannari ဆိုင်အားဖြင့် သြဂုတ်လ 27, 2019
နွေရာသီ! မင်္ဂလာပါအိတ် careyour ဖို့ကိုဘယ်လို! ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏အိတ်နှင့်အတူကောင်းစွာလုပ်နေတာမျှော်လင့်ပါတယ်! အကြှနျုပျတို့သညျကိုပြောပြချင် ...
hannari ဆိုင်အားဖြင့် ဇြန္လ 26, 2018
မင်္ဂလာပါ gorgeous.We သင်သည်သင်၏အိတ်နှင့်အတူကောင်းစွာလုပ်နေတာမျှော်လင့်ပါတယ်! သငျသညျဒိုင်ယာနာခတ်? မင်းသမီးဒိုင်ယာနာ Di ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်ကိုအသုံးပြုအရာကိုကျော်ကြား Chanel ၏အိတ်သိလား ...
အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့, မင်္ဂလာပါ။ ဒါဟာနွေဦးပေါက်ပဲ!
hannari ဆိုင်အားဖြင့် မတ်လ 28, 2018
သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အရာပြင်ပရှိနွေဦးအဘို့ကောင်းသောလိမ့်မည်, ဤအနီ / ပန်းရောင်အရောင် Chanel အိတ်မကြည့်သလဲ? Hi, ...
Posted in, ပန်းရောင်, နီသော, နွေဦးပေါက်
hannari ဆိုင်အားဖြင့် နိုဝင်ဘာလ 20, 2017
Black ကသောကြာနေ့, ဆိုက်ဘာဘာလဲ? မင်္ဂလာပါအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့! ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏အိတ်နှင့်အတူကောင်းစွာလုပ်နေတာမျှော်လင့်ပါတယ်! ဒါဟာအနက်ရောင်သောကြာနေ့ဟုခေါ်ဝေါ်သောရာသီဖြစ်သည်! ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ EV စျေး ...
hannari ဆိုင်အားဖြင့် အောက်တိုဘာလ 03, 2017
မင်္ဂလာပါအရမ်းကောင်းတယ်ခင်ဗျားအိတ်နဲ့အတူနေကောင်းလားလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ နွေရာသီမှာမင်းရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အိတ်ကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတာပြောပြချင်ပါတယ်။ သင့်အိတ်ကို BO ထဲမထည့်ပါနှင့်။